Zvakanakira Bensen Kambani
Bensen kambani pamusoro pemakore inoomerera pahunhu hwekutanga, vatengi vechinangwa, tarisa pane kukura kwe mota yemukati trim. Bensen anga ari mumakore gumi apfuura ekuziva ruzivo, uye ave neyedu fekitori nemusangano wekugadzira, kune wese mutengi kuti avake yakakodzera yavo yemukati yekushongedza yemukati. Panguva imwecheteyo, isu tinotora tekinoroji yepamberi, uye yakanakisa mhando mbishi zvinhu zve auto microfiber dehwe. Bensen inogadzira zvigadzirwa zvakanakisa, uye inotarisira kumisidzana kwenguva refu pamwe neetarenda rese rekune dzimwe nyika. Ndiyo sarudzo yako usingademba kusarudza Bensen.
● Zvakanakira Bensen Kambani:
1.Bensen ine yayo fekitori uye inogona kupa zvakagadziriswa masevhisi.
2.Tine hukuru hukuru hweganda rakagadzirira kutumirwa pakarepo.
3. 40+ akasiyana mavara e mota microfiber yeganda yesarudzo yako
4. Zvigadzirwa zveBensen zvinowanikwa mumhando dzakasiyana siyana, kusanganisira maBMW mapatani, mapini pini, nezvimwewo Uye zvakare kugadzirisa kunowanikwa zvinoenderana nezvaunoda.
5. Mahara sampuli inogona kupihwa yako yekutarisa mhando.
6.Chikwata chehunyanzvi kugadzirisa matambudziko ako nezve zvemukati memota.
● Zvakanakira Bensen zvigadzirwa:
✧ Zvakanakira microfiber dehwe:
Auto microfiber dehweine akasiyana siyana mavara, isu tine 40+ mavara evatengi kusarudza kubva. Yakakwirira ruvara kukasira. Uchishandisa ISO 105-X12 nzira, iyo yakaoma yekukwiza ruvara kutsanya kweBensen's microfiber yeganda yemotokari inogona kusvika 5. Iyo zvakare inogona kumira yakasimba simba rekubvarura re80N. Bensen'smota microfiber yeganda inenge ichifema kunge dehwe chairo.
Simba rakasimba kudzivisa, nyore kuchenesa. Kofi uye muto madonhwe zvinogona kubviswa neunyoro pepa tauro; yakanaka kupfeka kuramba. Kushandiswa kwemazuva ese hakuchina kusakara, kunyangwe iko kushandiswa kwesimbi zvinhu zvinokakavadzana, asi zvakare zvinogona kuramba zvakachena, pasina pachena mucherechedzo wekupfeka. Bensenauto suede dehweinoshandisa microfiber suede dehwe, yakasarudzika mamiriro kuona kwayo yakanaka mweya kukwana; ruzivo rwekutyaira zvirinani. Inogona kudzivirira muviri wemutyairi uye chigaro kubva pakutsvedza kana uchityaira nekukurumidza. Ruvara rwakazara kupfuura PU dehwe, uye chinoonekwa chino fanika neganda. Mune kumwe kusanganisa kwemavara, iwo maitiro ekuona akasimba kupfuura PU dehwe.
✧ Makomborero emakorari epasi emotokari:
1.Iyo silika yekumavara dhizaini, inogona kuve inoshanda kudzora guruva uye tsvina matsi mukati, haifanire kutarisira zuva rega rega, asiwo kuchengetedza mota yakachena;
2.High-mhando zvinhu, hupenyu hwebasa kweanopfuura makore mashanu;
3.Each modhi inoyera tsoka yemata data, yakasarudzika, hapana njodzi dzekuchengetedza;
4.Car uriri nepanhovo haina kukanganisa kutyaira kwekutyaira, saizi yematsoka etsoka inofananidzwa nemota chaiyo, zvikamu zvakakosha, senge batira, saizi yekumusoro yakagadzirirwa nenzira kwayo, haizovi nekakukanganisa kuduku.
5.Ruvara rwakazara, kusangana nesarudzo yako.
✧ Zvakanakira chigaro chemotokari cushion yakaiswa:
Bensen kambani chigaro chemotokari cushion jira uchishandisa yakachena michero michero, inoshamisira ganda uye yakasununguka, inorwisa-bhakitiriya uye inorwisa-itch, inofema uye yakanaka kudikitira, anti-static, hapana pilling, isingavhiringidzike, isina kumonera kumucheto, yakapfava uye yakatsetseka. Pazasi peganda uchishandisa 1.4 mm yakakwira kusimba kwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza TPU imwe furo yeganda, inogona kuve nechokwadi chekuti chigaro chechigaro chakapfava kusimba simbi, kusakara nemishonga isiri-inotsvedza, kusimba kwakasimba hakukanganisi. Pazasi reganda mhango dhizaini inowedzera zvakanyanya kufema kweganda. Uye kushandiswa kwemhando yepamusoro yekushongedza tekinoroji (yakanyanya kushandiswa mune yekumusoro-mbatya zvipfeko, ngowani uye zvimwe zvekushongedza), kuvandudza kwemaindasitiri echinyakare machira maitiro, 16358 kusona kurova, kutsanangura akakwana matatu-mativi ekumaguta skyscraper mumvuri.Car chigaro pamutsago inogona kubvisa kuneta paunenge uchityaira, kana uchida, ndokumbirawo utibate.